Archive du 20180305
Latsaka an-katerena ny firenena Voatery miditra an-tsehatra ny fiangonana
Tsy toy ny talohan’ny taona 1991 sy 2002 ary 2009 intsony ny dindon’ny zavatra hitranga mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana.
Minisiteran’ny raharaham-bahiny Nidinan’ny praiminisitra ifotony mihitsy
Nidina ifotony teny amin’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny, hijery ny fizotran’ny fikarakarana ny fihaonana an-tampony faharoan’ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjarampahefana frantsay sy Madagasikara ny praiminisitra,
Mponina ao an-dapa Manomboka be misabaka
Sarotra ny miala amin’ny mahazatra, hoy ny fitenenana izay. Moa va tsy toy ny efa nisy tamin’ireo taom-pifidianana hafa rehetra tany aloha sy fotoam-panjakana akaiky ho rava hatramin’izay ihany no sary hita asehon’ireo mpanao politika eto amintsika !
Mpitondra malagasy Mamono hasina ny vahoaka
Fanindroany izao, tao anatin’ny 2 taona, no nisy vaovao mikasika an’i Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy ka ny tany andafy no nahafantatra azy voalohany ary ny mpitondra antsika hatrany anefa no nilaza azy.
Datim-pifidianana Niteniteny foana ny minisitra Rabary Njaka
Nitsako alohan’ny vazana ny minisitry ny raharaham-bahiny Malagasy Henri Rabary Njaka ka sahy nilaza tamin’ny fahitalavitra Frantsay TV5
Hery Rajaonarimampianina Tsy arakaraky ny diplaoma azo ny asa vita
Toy ny tany Italie ny volana oktobra 2017 nahazoana ilay diploma “Honoris Causa” niteraka resabe, dia notoloran’ny oniversite Rudn any Rosia io mari-pahaizana io indray ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny zoma 2 martsa lasa teo.
Fifampiarahaban’ny TIM Boriborintany faha-6 Notronin’ny filoha Marc Ravalomanana mivady
“Faly aho tena faly aho », hoy ny filoha Marc Ravalomanana tonga teny Ambodihady Ambohimanarina raha nanotrona sy nanatrika ny Fifampiarahabana noho ny taona vaovao 2018 ny Tiako i Madagasikara Ambohimanarina boriborintany faha-6 ny sabotsy 3 martsa teo.
Dia ahemotra ve ny noely satria hifidy filoha? Dia any Frantsa ve sanatria no handatsa-bato koa? Mihevera tena ry Jean isany fa sao dia efa mivadik'atidoha. Madagasikara anie no resaka eto ka aoka kely aloha!
Tontolon’ny fitsarana Ho avy indray ny ampamoaka manaraka..
Miandry izay ho fivoaran’ny toe-draharaha mikasika ny tontolon’ny fitsarana isika ankehitriny taorian’ny savorovoro niseho ny faran’ny herinandro lasa teo. Niteraka tsy fifankahazoana teo amin’ny sendikan’ny mpitsara na ny SMM sy ny minisitera ny nisamborana ny naman’izy ireo nandray an-tanana ny raharaha Houcine Arfa.
Fisaraham-panambadiana 7 isan’andro ireo fangatahana voarain’ny fitsarana
Fito isan’andro ireo olona mangataka taratasy hahafahana miroso amin’ny fisaraham-panambadiana tonga manatona ny lapan’ny fitsarana etsy Anosy nanomboka ny taona 2013 no mankaty.
Kaominina Ampasikely Nahatsangana efitrano fianarana niaraka tamin’ny Telma
Vokatry ny fiaraha-miasa tamin’ny Fondation Telma sy ny fikambanana Vonjy Havana no nahafahana nanangana efitrano efatra ho an’ny Epp sy Ceg ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ampasikely.
Baolina kitra Ligue 1 Analamanga Mbola mitarika an’isa ny As Adema
Mitohy ny fandresena tsy miato azon’ny As Adema eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga amin’ny taranja baolina kitra sokajy Ligy 1 fa mbola nandresy ny Tanà Formation 2-0 indray izy ireo teo amin’ny andro faha-3 omaly alahady 4 martsa tetsy Mahamasina. Mbola ity ekipan’ny Seranana Ivato ity, araka izany, no mitana ny laharana vonjimaika ankapobeny hatreto.
Rugby Seksiona Antananarivo-Renivohitra Tompondakan’ny sokajy D-1 Elite II ny 3Fai
Ny 3Fai Ambalavao Isotry tantanan-dRtoa Rakotonirina Raissa no voahosotra ho tompondakan’ny seksionin’ny rugby eto Antananarivo-Renivohitra raha nandavo ny Cosm du Sud Anosibe 17-06 omaly teo amin’ny lalao famaranana natao tetsy amin’ny kianjan’i Malacam Antanimena.
Basket « Coupe du Président » Zône Centre Lavon’ny Cospn 70-60 ny Mb2All omaly tao Toamasina
Ny Cospn Analamanga no voahosotra ho tompondakan’ny Zône Centre eo amin’ny fifaninanana hahafahana miatrika ny Play Off any Toliara amin’ny fiadiana ny “Coupe du Président” amin’ny taranja baket-ball andiany faha-4.
Neymar Vita ny fandidiana, maka aina tsara aloha
Any Mangaratiba, tanàna iray malaza amin’ny fizahantany , 100 km miala an’i Rio de Janiero no miala sasatra nanomboka omaly alahady ilay mpanao baolina kalaza milalao ao amin’ny PSG Neymar Jr.
Misavoritaka ny fanjakana !
Niteraka savorovoro teto amin’ny firenena sy teo amin’ny samy mpitondra ny fanambaran’ny minisitry ny raharaham-bahiny sady lehiben’ny diplomasia Malagasy momba ny datim-pifidianana.
Fifandraisana ara-barotra maneran-tany Tsy mahomby i Madagasikara
Tsy mitoka-monina Madagasikara fa mifandray amin’ireo firenena avy any ivelany.
Vidim-piainana miakatra Mangina ny Malagasy
Efa mananika ny 8% ny fiakaran’ny tahan’ny vidim-piainana. Tsy misy izay tsy miaka-bidy ny zavatra rehetra eto Madagasikara.
MALAGASY TIA MIFETY FANAKONANA FAHANTRANA
Mahagaga fa rehefa mifarana ny herinandro, indrindra ny zoma manifika, dia maro ny Malagasy mandeha mifety. Feno daholo ny toeram-pisotroan-toaka,
Fanesorana ny vokatra Tiko eo amin’ny tsena Maro ireo mpivarotra matiantoka
Tsy azo hamidy eny an-tsena intsony amin’izao ireo karazam-bokatra vokarin’ny orinasa TIKO Triple AAA, araka ny didy navoakan’ny minisiteran’ny varotra sy ny fanjifana.